UN Human Rights Council reiterates urgent need to ensure accountability in Myanmar - Aliran
Home Myanmar Watch UN Human Rights Council reiterates urgent need to ensure accountability in Myanmar
UN Human Rights Council reiterates urgent need to ensure accountability in Myanmar
It also calls on the Myanmar authorities to grant full, unrestricted and unmonitored access for the UN
Geneva – The Human Rights Council adoptedaresolution on the situation of human rights in Myanmar, which reiterated the urgent need to ensure that all those responsible for serious international crimes and human rights violations throughout Myanmar are held to account through credible, competent and independent national or international criminal justice mechanisms.
The resolution requests the UN high commissioner for human rights to monitor and assess the situation withafocus on accountability, in complementarity to the work of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar and the reports of the UN special rapporteur.
It also calls on the Myanmar authorities to grant full, unrestricted and unmonitored access for the UN, including the mechanism, and urges all relevant actors in Myanmar to cooperate with the mechanism in the execution of its mandate and in the protection of victims and witnesses.
“We continue to collect evidence and build case files of the most serious international crimes that have been committed throughout Myanmar since 2011,” said Nicholas Koumjian, head of the mechanism.
“Since the Tatmadaw’s seizure of power in February 2021, we have also been collecting evidence to analyse whether crimes against humanity have been committed following reports of arbitrary arrests, torture, enforced disappearances and the use of force, including lethal force, against those peacefully opposing the coup.
“We are committed to playing our role to ensure accountability for these crimes and continue to call on the government of Myanmar to cooperate with our effort to establish the truth.”
The Independent Investigative Mechanism for Myanmar was created by the UN Human Rights Council in September 2018 to collect evidence of the most serious international crimes and violations of international law committed in Myanmar.
The mechanism is further mandated to build case files that could facilitate criminal proceedings in national, regional or international courts in order to hold individuals responsible for such crimes.
ဂျီနီဗာ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၄ ) ရက်။ ။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကြီးလေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူအားလုံး တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော၊ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတွင်း၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေး ယန္တရားများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရန် အရေးပေါ် လိုအပ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်တ္ငင် ထပ်လောင်း ပြောဆိုထားသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး အနေဖြင့် တာ၀န်ခံမှုရှိရေးကို ဦးတည် အလေးထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား၏ အလုပ်နှင့်ထပ်တူ၊ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာများကို ဖြည့်စွက်စေခြင်းဖြင့်၊ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် စိစစ်အကဲဖြတ်ရန် အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် တောင်းဆိုထားသည်။ ယန္တရားအပါအဝင်၊ ကုလသမဂ္ဂအား အပြည့်အဝ၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်၊ မြန်မာ့အာဏာပိုင်များကို အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် တောင်းဆိုထားသည်။ ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နစ်နာသူများ၊ မျက်မြင်သက်သေများအား ကာကွယ်ပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့်၊ မြန်မာယန္တရားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
“၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေစပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကြီးလေးဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေကို ဆက်လက် စုဆောင်းပြီး၊ အမှုတွဲတွေကို ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်နေပါတယ်” ဟု ယန္တရား၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Nicholas Koumjian က ပြောကြားခဲ့သည်။ “၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက တပ်မတော် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၊ တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ နှိပ်စက် ညှဥ်းပန်းခြင်း၊ အစဖျောက်ခြင်းနှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်သူများအပေါ် သေစေတဲ့အင်အား အပါအဝင်၊ အင်အားသုံးဖြိုခွဲခြင်း စတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့အခါ၊ ဒီလုပ်ရပ်တွေက လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုအရာ ရောက်မရောက် စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ဖို့၊ သက်သေအထောက်အထားတွေကို ကျွန်တော်တို့ စုဆောင်းနေပါတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုအတွက် တာ၀န်ခံမှုရှိရန် သေချာစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်မဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်းချက်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဘက်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြီးလေးဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ဆိုင်သည့် သက်သေ အထောက်အထားများကို စုဆောင်းရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို တာဝန်ခံစေရန် နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၌ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ စီရင်နိုင်စေရန်၊ အမှုတွဲများကို တည်ဆောက်ပေးရန်အတွက် မြန်မာယန္တရားအား နောက်ထပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားသည်။